Kiniiniyada Android: wararka, xanta, tijaabooyinka iyo inbadan! - Androidsis | Androidsis (Bogga 2)
Samsung Galaxy Tab Active 3 ayaa lagu shaaciyey Exynos 9810, batariyada laga saari karo iyo S-Pen
Samsung ayaa ku dhawaaqday Galaxy Tab Active 3 oo ah aalad loo soo bandhigay wax soo saarkeeda. Faahfaahinta oo dhan halkan ka ogow.
Ka faa'iideyso maalmaha HUAWEI bilaa VAT oo horey u jiray !!
Huawei wuxuu mar kale bilaabay Maalmo bilaa cashuur ah oo wuxuu ku sameeyaa alaab aad muhiim u ah oo uu ka haysto buugiisa.
Samsung Galaxy Tab S5e waxay heshaa cusbooneysiin One UI 2.5 ah
Samsung Galaxy Tab S5e waxay bilaabaysaa inay hesho One UI 2.5. Raadi dhammaan wararka ku saabsan cusbooneysiintan cusub.
Samsung waxay ku shaqeysaa kiniin cusub oo wadada dhinaceeda ah: kani wuxuu noqon doonaa Galaxy Tab Active 3
Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta ugu horreysa ee astaamaha farsamo ee Samsung Galaxy Tab Active 3, kiniin cusub oo soosaara ah.
Galaxy Tab S5e wuxuu helayaa cusboonaysiinta amniga Sebtember 2020
Samsung Galaxy Tab S5e wuxuu bilaabay inuu helo casriyeynta amniga Sebtember 2020
Kiniinka Google ee Nexus 7 mar dambe ma taageerayo waxyaabaha ku jira HD Netflix
Netflix waxay cusbooneysiisay tirada qalabka HD-tayo leh ee ku habboon barnaamijkeeda iyadoo laga saaray halyeeyga Google Nexus 7
Samsung Galaxy Tab A7 hadda waxaa laga heli karaa Spain si loogu sii haysto
Nooca dhaqaalaha ee Galaxy Tab S7 ayaa hadda laga heli karaa shabakadda Samsung iyadoo la adeegsanayo magaca Galaxy Tab A7 iyo qayb ka mid ah 229 euro
Samsung Galaxy Tab S6 wuxuu bilaabaa inuu helo One UI 2.5
Samsung Galaxy Tab S6 wuxuu bilaabaa inuu helo One UI 2.5 wuxuuna si tartiib tartiib ah u gaari doonaa wadamo kala duwan. Baro dhammaan wixii ku saabsan cusbooneysiinta cusub.
Samsung ayaa hogaamisa suuqa kiniiniyada ee Yurub
Intii lagu gudajiray rubuca labaad ee 2020, Samsung waxay la kulantay koror 70% iibka kiniiniyada, taas oo u saamaxday inay hogaamiso suuqa gobolka EMEA
Huawei MatePad T 10s: Kiniin cusub oo ay la socdaan Kirin 710A iyo EMUI 10.1
Huawei wuxuu ku dhawaaqay MatePad T 10s, kiniin cusub oo leh qaabeyn weyn iyo qiimo jaban. Ogow faahfaahinta iyo taariikhda imaatinkaaga.
Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020) gabi ahaanba waa la dusay, oo ay ku jirto qiimaha
Dhammaan faahfaahinta kiniiniga xiga ee Samsung, Galaxy Tab A7 10.4 (2020), waa la dusiyay. Ogow dhammaan faahfaahinteeda.
Galaxy Tab S7 iyo S7 + waxay yimaadeen Spain: helitaanka iyo qiimaha rasmiga ah
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta qiimaha Samsung Galaxy Tab S7 iyo Tab S7 +, marka lagu daro qiimaha rasmiga ah ee Spain. Adiga ayaa kaa yaabi doona!
Galaxy Tab S7 iyo S7 +: qeexitaannada iyo qiimaha
Galaxy Tab S7 iyo S7 + hadda waa rasmi. Haddii aad rabto inaad ogaato dhammaan astaamaheeda iyo qiimaha, waxaan kugu martiqaadayaa inaad fiiriso maqaalkan.
Noocyada buuxa ee Galaxy Tab S7 iyo Tab S7 +
Dhowr maalmood ka hor soo bandhigideeda iyo sidii caadiga ahaydba, qeexitaannada buuxa ee Galaxy Tab S7 iyo Tab S7 Plus ayaa durba la sii daayay
Daadinta cusub waxay xaqiijineysaa dhammaan faahfaahinta naqshadeynta iyo astaamaha farsamada ee Samsung Galaxy Tab S7 +, oo ah nooca ugu badan ee fiitamiin ah.
Waxaan horeyba u ogaanay qeexitaanada Galaxy Tab S7
Sidii la filayay, qeexitaannada sharadka cusub ee Samsung ee suuqa kiniinka, Galaxy Tab S7, ayaa hadda la faafiyey.
Soo dejiso waraaqaha gidaarka ee Galaxy Tab S7 kahor soo bandhigiddeeda
Inta aan sugeyno soo bandhigida Galaxy Tab S7, waxaan hadda soo dejisan karnaa waraaqaha cusub ee ka imaan doona gacanta jiilkan cusub.
Honor Tab 6 iyo Honor Tab X6: Kiniinno cusub oo leh Kirin 710A, batari weyn iyo Android 10
Maamuusku wuxuu ku dhawaaqay tabta cusub ee Tab 6 iyo Tab X6, laba sharad oo aad u la mid ah si loo cusbooneysiiyo qaybta qalabka soo saaraha.
Samsung Galaxy Tab S7 iyo Galaxy Tab S7 + oo lagu muujiyey qaabkii ugu horreeyey
Labada nooc ee ugu horreeya ee Samsung Galaxy Tab S7 iyo Galaxy Tab S7 + kiniiniyada ayaa la soo saaray, laba nooc oo iman doona bisha Ogosto.
Android wuxuu bilaabmayaa inuu yimaado Galaxy Tab A 10.1 iyo kiniiniyada Galaxy Tab A 8.0
Noocyada kala duwan ee Samsung ee kiniiniyada miisaaniyada, taxanaha Tab A, ayaa bilaabay inuu helo cusbooneysiinta Android 10
Galaxy Tab S6 wuxuu bilaabaa inuu helo Android 10 oo leh One UI 2.1
Cusbooneysiinta mudada dheer la sugayay ee Android 10 ee Samsung ee Galaxy Tab S6 ayaa bilaabatay in laga helo Jarmalka iyada oo loo marayo lakabka hal-abuurka One UI 2.1.
Panasonic Toughbook A3: Kiniin cusub oo qallafsan oo leh Snapdragon 660 iyo Android 9 Pie
Panasonic ayaa ku dhawaaqday Toughbook A3, oo ah kiniin loogu talagalay qaybta xirfadeed ee la socota shaashad wanaagsan iyo Android 9 suuqa.
Android 10 wuxuu bilaabmayaa inuu yimaado Galaxy Tab S4 iyo Tab S5e
Android 10 wuxuu bilaabay inuu ku yimaado Samsung Galaxy Tab S4 iyo Taba S5e kiniiniyada, sida Samsung ku shaacisay khariidada
Sawirada ugu horreeya ee waxa Samsung Galaxy Tab S7 u ekaan karo
Waxaan ku tusineynaa sawirradii ugu horreeyay ee kan xiga ee Samsung ah, Galaxy Tab S7, u ekaan karo
Haddii aad haysatid kiniiniga Amazon Fire HD, nasiib ayaad ku jirtaa maxaa yeelay waxaad awoodi doontaa inaad rakibato Google Play Store adigoon xidid noqon ama isticmaalin amarada ADB
Sharafta V6 Kiniiniga: Kiniin cusub oo leh 2K guddi iyo isku xirnaanta 5G
Sharafta ayaa soo bandhigtay Tablet-keeda cusub ee V6, oo ah aalad isku xirnaanta 5G taasina waxay keeneysaa shaashad runtii muhiim ah.
Amazon waxay ku laabanaysaa dagaalka iyadoo ay la socdaan kiniiniyada Amazon Fire 8 HD
Amazon waxay ku soo noqotaa khidmadda qaybta kiniinka iyada oo la cusbooneysiiyay dabka 8 HD version 2020 iyada oo dhowr horumarin la barbar dhigay 2018
Kiniiniyada ugu fiican ee la bixiyo Maalinta Hooyada
Haddii aad dooratay inaad siisid kiniin loogu dabaaldego Maalinta Hooyada, qodobkaan waxaan ku tusi doonaa ikhtiyaaraadka ugu fiican suuqa.
Huawei MatePad waa rasmi: 10,4 ″ guddi, Kirin 810 iyo M-Pencil
Huawei MatePad ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay, qalab dhexdhexaad ah oo loogu talagalay ardayda oo la jaan qaadi kara nooc kasta oo macaamiil ah.
Huawei MatePad 10.4 wuxuu muujinayaa dhammaan qeexitaankiisa ka dib markii lagu muujiyay dukaamada Shiinaha
Huawei MatePad ayaa hadda daadinaysa dhammaan faahfaahinteeda farsamo ka dib markii ay sii martay laba tafaariiqle oo ku yaal Shiinaha, oo muujisay naqshaddeedii ugu dambaysay.
Samsung waxay ku dhawaaqeysaa Galaxy Tab S6 Lite cusub boggeeda internetka
Kumbuyuutarka cusub ee Samsung, Tab S6 Lite, ayaa durbaba rasmi ah, inkasta oo xilligan kaliya lagu joogo bogga Samsung ee Indonesia
Kiniiniyada Android diyaar ma u yihiin inay shaqeeyaan?
Toddobaadyadan oo shirkado badan lagu qasbay inay telecommute, waxaan isweydiineynaa, kiniiniyada Android diyaar ma yihiin?
Samsung Galaxy Tab S6 Lite waxay muujineysaa dhammaan qeexitaankiisa iyo war-saxaafadeedyada
Samsung Galaxy Tab S6 Lite ayaa shaaca ka qaaday dhammaan qeexitaankiisa iyo wax soo saar rasmi ah oo cusub ka hor inta aysan si rasmi ah u bilaabin.
Getac ZX70 G2, kiniin cusub oo adag ayaa la yimid Android 9.0
Kiniiniga cusub ee Getac waxaa lagu magacaabaa ZX70 G2 waxaana loogu talagalay qeybta xirfadleyda. Waxay ku timid qalabaysan baytar weyn oo bixiya ismaamul wanaagsan.
Crosscall CORE-T4, kiniin cusub oo xirfadle ah ayaa hadda la heli karaa
Crosscall waxay ku dhawaaqday kiniin cusub oo loo yaqaan 'Core-T4' oo ku wajahan qaybta xirfadeed. Qalab ku biiraya qoyska aasaasiga ah ee taleefannada.
Kiniiniyada iyo kombiyuutarada shaqsiyadeed si loo bixiyo Maalinta Aabbaha
Haddii aad ka fikireyso inaad aabe siiso kaniini ama kumbuyuutar si uu ugu dabbaaldego maalintiisa, hoosta waxaan ku tusaynaa dalabyada ugu fiican ee laga heli karo Amazon
Samsung Galaxy Tab S6 5G hadda waa rasmi: Waxaa la iibinayaa berri Kuuriya
Samsung ayaa si rasmi ah u shaacisay kiniinka Galaxy Tab S6 5G, isagoo maanta yimid Koonfurta Kuuriya. Waxay noqon doontaa kiniinigii ugu horreeyay ee shirkadda 5G.
Woxter wuxuu bilaabay X200, kiniin cusub oo leh Android 9.0 Go
Woxter wuxuu soosaarayaa kiniin cusub oo loo yaqaan 'X-200' kaas oo wata nooca ugu dambeeya ee Android Go, 9.0 isla markaana leh qiimo aad u soo jiidasho badan.
Honor Tab 6 wuxuu la imaan lahaa Sharafta V30
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan faahfaahinta ugu horreysa ee ku saabsan Honor Tab 6, kiniin cusub oo sharaf ah oo la soo bandhigi doono Nofeembar oo loo yaqaan 'Honor V30'.
Galaxy Active Tab Pro: Kiniin cusub oo Samsung ah
Raadi wax walba oo ku saabsan Samsung Galaxy Active Tab Pro oo si rasmi ah loogu soo bandhigay IFA 2019 oo aan horeyba u ogaanay wax walba.
Raadi wax badan oo ku saabsan mashruuca Huawei ee bilaabaya taxane kiniinno ah oo Ruushka ku yaal oo aan si rasmi ah ugu adeegsan doonin Android nidaam hawlgal.
Teclast T30 waa kiniin cusub oo casri ah oo hada lagu soo saaray Mediatek Helio P70 chipset, 10.1-inch FullHD + shaashad iyo inbadan.
Qiimaha Galaxy Tab S6 ayaa lagu muujiyay Yurub
Raadi wax badan oo ku saabsan qiimaha uu Galaxy Tab S6 ku lahaan doono furitaankiisa Yurub si rasmi ah maadaama horey loogu sii daayay Holland.
Soo ogow farqiga u dhexeeya Galaxy Tab S6 iyo Galaxy Tab S5e, labada kiniin ee ugu muhiimsan ee Samsung soo bandhigtay illaa iyo sannadkan.
Soo ogow qeexitaanka buuxa ee Galaxy Tab S6, kiniiniga cusub ee Samsung ee heer sare ah oo horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay.
Galaxy Tab S6 ayaa la soo bandhigi doonaa berri
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bandhigga rasmiga ah ee Galaxy Tab S6 oo dhici doona berri sida Samsung horeyba si rasmi ah ugu dhawaaqday.
Tani waxay noqon doontaa Samsung Galaxy Tab S6: naqshad naqshadeysan iyo astaamo
Dhammaan faahfaahinta naqshadeynta iyo astaamaha Samsung Galaxy Tab S6, kiniinka xiga ee soo saaraha Kuuriya, ayaa la sii daayay.
Raadi wax walba oo ku saabsan Galaxy Tab A 8.0 (2019), kiniin cusub oo Samsung ah oo si rasmi ah dhowaan loogu bilaabi doono dukaamada.
Huawei MediaPad M6: Laba kiniin oo cusub oo loogu talagalay astaanta
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan Huawei MediaPad M6 oo si rasmi ah loogu soo bandhigay Shiinaha waqtiganna wuxuu ku yimaadaa laba cabbir oo kala duwan.
Google waxay xaqiijineysaa inaysan wax dan ah ka laheyn kiniiniyada
Google waxay xaqiijineysaa in qaybta kiniiniyada uusan isaga aheyn waxayna ku dhawaaqday inay si joogto ah uga tegeyso.
Huawei wuxuu soo bandhigi doonaa MediaPad M6 toddobaadkan
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taariikhda soo bandhigga rasmiga ah ee Huawei MediaPad M6 oo horeyba si rasmi ah loo shaaciyey waana Juun 21.
Ka ogow waxbadan oo ku saabsan daahfurka Galaxy Tab S5e iyo Galaxy Tab A 2019 si rasmi ah Isbaanishka halkaas oo hadda laga iibsan karo.
Samsung waxay ka shaqeyneysaa kiniin cusub: 7-inch Galaxy Tab A?
7-inch oo Samsung Galaxy Tab A ah oo xasaasi ah ayaa soo maray FCC, isagoo xaqiijinaya qeyb ka mid ah astaamaha farsamo ee ay yeelan doonto.
Cusbooneysiinta 'Android Pie' ee loogu talagalay Galaxy Tab S4 ayaa loo siidaayaa qof walba, marka muddadii tijaabada hore ay ku dhammaatay 4 dal.
Raadi wax badan oo ku saabsan qorshooyinka Huawei, oo horeyba uga shaqeynayay laba kiniin oo cusub oo ay tahay inay si rasmi ah u garaacaan dukaamada bilaha soo socda.
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan kororka iibka ee kiniiniyada Huawei, taas oo ka dhigaysa sumadda midda labaad ee ugu iibsiga badan suuqa.
Samsung Galaxy Tab S5e waxay lumineysaa calaamadda Wi-Fi haddii aan qaab qaas ah u qaadanno
Dad badan oo adeegsadayaal ah ayaa sheeganaya inay dhibaatooyin ku qabaan isku xirka Wi-Fi ee Tabta Galaxy Tab S5e markay u hayaan qaab gaar ah
Tani waa sida Samsung Galaxy View2 ay u egtahay xayeysiinkeedii ugu horreeyay
Waxaan ka hadlaynay dhowr bilood oo ku saabsan sida jiilka labaad ee Galaxy View u noqon karo, kiniin asal ahaan ...
Raadi wax badan oo ku saabsan Galaxy View 2, jiilka cusub ee kiniiniga ugu weyn ee Samsung ee horeyba si rasmi ah khadka tooska ah looga helay
Haddii aad rabto inaad bixiso kiniin loogu talagalay Maalinta Jacaylka, hoosta waxaannu ku tusaynaa kuwee ah kiniinnada ugu fiican ee la bixiyo Maalinta Jacaylka
Qeexitaannada suuragalka ah ee Samsung Galaxy View 2
Muuqaalka halbeegga Geekbench ee Galaxy View 2 wuxuu tilmaamayaa bilow u dhow jiilkan labaad ee kiniin Samsung ah
Barnaamijyada muhiimka ah ee kiniiniyada Android
La cusbooneysiiyay 23/1/19: LAGU DARAY LABA LAYAAB CUSUB IYO TABABARKA VIDEO HANDY !! Waxaan bilaabayaa qayb cusub oo fiidiyoow ah, fiidiyoow iyo maqaal aan raaci doono ...
Dib u eegista Fiidiyowga ee qoto dheer ee Chuwi HiPad hadda waxaa lagu heli karaa wax ka badan € 120
Sidii aan horeyba ugu soo sheegay sanduuqii sanduuqa iyo dareenkii ugu horreeyay ee Chuwi HiPad, waqtigii ayaa la ii sheegay inaan kuu sheego ...
Feejignaan la'aan iyo dareenkii ugu horreeyay ee Chuwi Hipad. Kaliya € 122 !!
Daadadka ayaa tilmaamaya in Asus ay diyaariso Zenfone leh kamarad seddex geesood ah iyo kiniin 10 ″ Chrome OS ah
Sida laga soo xigtay odorosyo kala duwan, shirkadda Shiinaha, Asus, waxay si adag uga shaqeyneysaa inay ku hirgeliso buugyadeeda taleefan leh ...
Kiniin cusub ayaa laga soo saaray suuqa, waana Huawei MediaPad M5 Youth. Ogow astaamaha, tilmaamaha iyo qiimaha.
Honor Waterplay 8, kiniin biyo u adkaysta qiimo aan laga adkaan karin
Honor ayaa hadda soo bandhigtay Honor Waterplay 8, oo ah kiniin aan biyuhu xirin oo leh laba kamaradood oo suuqa ku garaacaya qiimo aad u xun.
Honor MediaPad T5 hadda waa rasmi. Wax ka baro dhammaan astaamaha, qeexitaannada farsamo iyo qiimaha kiniinkan cusub.
Google Home Hub, ama Kaaliyaha Google ee gurigaaga ayaa ku dhex jira kumbuyuutar
Haddii aad raadineyso Google Home oo leh shaashad, kani waa Home Hub. Waxaa lagu heli karaa boos celinta laga bilaabo maanta si toos ah loogu aado gurigaaga.
Samsung waxay ka shaqeyneysaa jiil cusub oo ka mid ah Galaxy View
Saddex sano ka hor, shirkadda Kuuriya waxay soo saartay kiniin weyn oo 18,4-inji ah, oo ah kiniin aan loola jeedin oo keliya suuqa gudaha, sida laga soo xigtay wararka xanta ah ee ka imanaya Kuuriya, Samsung waxay ka shaqeyn kartaa jiilka labaad ee Galaxy View, 18- kiniin inch
Telefoon, kiniin ama jajab? Maamuusku wuxuu xaqiijinayaa 8X, qalab leh shaashad taariikhi ah
Sharafta ayaa hadda xaqiijisay jiritaanka Honor 8X, oo ah nooca ugu dambeeya ee mobilka leh shaashad ballaaran. Waxaan kuu fidineynaa warka!
Kiniinka Alldocube X ayaa hadda laga heli karaa Indiegogo oo ah $ 219
Suuqa kiniiniyada, ka dib mudo bilow ah oo dhamaan soosaarayaasha ay suuqyadooda ku soo bandhigeen moodooyinkooda, hoos ayaa loo dhigay Ka dib markii dhowr toddobaad la sugayay, Alldocube X ayaa hada loo heli karaa boos celin iyada oo loo marayo shirkadda tirada badan ee laga heli karo Indiegogo
Ka faa'iideyso dalabkan oo ku soo iibso Chuwi Hi 9 Pro kaliya $ 139,9 waqti xaddidan
In kasta oo ay run tahay in ku soo noqoshada dugsiga ay weli u hadhsan tahay wax ka yar bil iyo inbadan ayaa ah ardayda aan xitaa rabin inay maqlaan mowduucan, the Haddii aad sugaysay dalab aad ku iibsato kiniin xiise leh qiimo ka badan xiisaha, Chuwi Hi9 Pro waxay u badan tahay inuu yahay midka aad raadineyso
Dhowr toddobaad ka hor waxaan ka hadalnay kiniin cusub oo ku saabsan in la arko iftiinka, Alldocube X, a ...
Samsung Galaxy Tab S4 waxaa la soo bandhigi doonaa Ogosto 1. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taariikhda soo bandhigidda kiniinka shirkadda Kuuriya.
Fiidiyowgii ugu horreeyay ee Galaxy Tab S4 waa la daadiyay
Jiilka cusub ee Galaxy Tab S, ayaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa, in kasta oo xilligan la joogo, shirkadda Kuuriya aysan xaqiijin taariikhda ay leedahay Fiidiyowgii ugu horreeyay ee Galaxy Tab S4 ayaa hadda soo ifbaxay, fiidiyow xaqiijinaya sii socoshada Naqshadaynta iyo luminta dareeraha faraha.
Qalabka kumbuyuutarka ee 'Galaxy Tab S4' wuxuu xaqiijinayaa inuu yeelan doono qalabka wax lagu baaro ee loo yaqaan 'iris scanner' iyo wajiga aqoonsi
Intii lagu jiray labadan toddobaad ee la soo dhaafay, tirada xogaha la xidhiidha labada kiniin ee soo socda ee shirkadda Kuuriya ay qorshaynayso inay ku bilawdo amniga ay Galaxy Tab S4 na siin doonto ayaa laga heli doonaa qalabka 'iris scanner' marka lagu daro nidaamka aqoonsiga wajiga
Sawirradii ugu horreeyay ee Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2018) oo aan lahayn badhanka jirka waa la sifeeyaa
Shalay waxaan ku tusnay qeexitaanka jiilka soo socda ee Galaxy Tab S4, oo ah kiniin heer sare ah oo aan suuqa la gaari doonin Snapdragon Sawirada ugu horreeya ee Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2018) hadda waa la sifeeyey waxayna muujineysaa annaga oo ah cibaado-wareedkii ugu weynaa ee lumay badhanka jirka
Samsung Galaxy Tab S4 Noocii Ugu Dambeeyay ee Xogaha
Sanadihii la soo dhaafay, waxaan aragnay sida tirada shirkadaha soo saaraya sharadka kiniiniyada ay si aad ah hoos ugu dhacday, oo ay kujirto midkeeda Marka wali ay jiraan bilooyin, ama maalmo, si loo soo bandhigo Galaxy Tab S4, dhammaan qeexitaanada horeyba waa loo sii daayay ee kiniiniga cusub ee Samsung
Alldocube wuxuu soo bandhigayaa kiniin leh shaashad 2k AMOLED ah, oo aan sida ugu fiican uga heli karno filimada aan jecel nahay.
Chuwi Hi9 PRO, astaamaha iyo qeexitaanka kiniinka leh Android Oreo
Soo saaraha Chuwi ayaa bilaabi doona Hi9 Pro bisha soo socota, oo ah kiniin leh tilmaamo aad u xiiso badan iyo astaamo qiimo aad u macquul ah.
Microsoft Edge browser ayaa hadda loo heli karaa kiniiniyada Android
Bog furaha Microsoft, Edge, wuxuu ku yimid kiniiniyada Android, in kasta oo ay wali ku jirto marxalad horumarineed oo cadaalad ah oo aan dhammaan xulashooyinka ay noogu soo bandhigi doonto qaybteeda ugu dambeysa la muujiyo.
Bangood: VOYO I8 Max kiniiniga Android oo leh qiimo dhimis. Ka ogow wax badan oo ku saabsan kiniinkan nooca Shiinaha ah ee aad hadda ku qaadan karto qiimo dhimis dukaanka caanka ah.
A Launcher Windows 10 qaab-xayeysiis ah oo si gaar ah loogu talagalay Kiniiniyada Android, oo u ekeysiinaya Windows 10 waayo-aragnimada desktop-ka si kaamil ah
Asus wuxuu soo bandhigayaa saddex kiniin oo cusub oo ah 8-inji iyo 10-inji oo ZenPad ah
Shirkadda elektaroniga ee Asus waxay soo bandhigeysaa saddex nooc oo kiniinno ah oo taxane ah oo taxane ah oo taxane ah oo ZenPad ah: nooc la cusbooneysiiyay oo ah 8 "iyo labo cusub 10"
Galaxy Tab S3, astaamo aad u fiican oo qiimo aan la tartami karin ah
Nidaamka MWC 2017 gudaheeda, Samsung wuxuu soo bandhigayaa Galaxy Tab S3, kiniin awood leh oo leh kumbuyuutar iyo stylus si uu ugu istaago iPad Pro
Sawirro cusub oo qarsoon oo Galaxy Tab S3 ah ayaa xaqiijinaya aaladda AKG iyo codka
New Leaks wuxuu xaqiijinayaa Samsung Galaxy Tab S3 wuxuu isku darayaa Keyboard Dock iyo astaamaha maqalka ee Harman's AKG
Kiniiniga ugu dambeeya ee Lenovo ayaa ugu horreyn ah laptop-hooseeya
Haddii aad raadineyso qalab ujeeddooyin kala duwan sida soo-saarista waxyaabaha ama wax soo saar, Lenovo Yoga A12 ayaa adiga loogu talagalay.
LG wuxuu fayl gareysanayaa patent cusub oo loogu talagalay iskudhafka taleefanka-kiniinka
LG waxay xareysay patent cusub oo u eg isku-darka isku-laabashada taleefanka gacanta ee casriga ah iyo kan ugu yar kaas oo wax badan ku leh shirkadda Samsung.
Nougat casriyeynta loogu talagalay Xperia Z5, kiniin Z4 iyo Z3 ayaa helaya shahaadada PTCRB
Cusboonaysiinta 'Android Nougat' waxay heshaa shahaadada PTCRB oo muujinaysa in dhowaan loo geyn doono dhammaan aaladahaas.
OCU waxay ku siinaysaa 8 tablet kiniin ah Android
Ururka Macaamiisha iyo Isticmaalayaasha (OCU) wuxuu ku siinayaa kiniin 8-inch ah oo Android ah si aad xubin uga noqoto xubinimo la'aan, ogow
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa dib u eegista Yootak Chic, oo ah fikrad cusub oo ku saabsan heysta gaariga magnetic-ka oo u yimid inuu wax ka beddelo suuqa haysta mobilka
Lambarka nooca Samsung nooca SM-P950 waxaa ku jira S Pen
S Pen ayaa loo isticmaali doonaa kiniiniga cusub ee Samsung, oo leh nambarka nambarka SM-P950, oo loo maleynayo in lagu soo bandhigi karo bandhigga IFA.
Jide wuxuu ku dhawaaqay Remix Pro tablet, Remix mini PC iyo laptop Acer, dhamaantood waxay wadaan Remix OS 3
Remix Pro waa aaladda ugu awooda badan ee lagu dhawaaqay ee Acer lagu dari karo iyada oo ah shirkad mustaqbal badan ku aragta Remix OS.
Lenovo wuxuu soo bandhigayaa taleefanka gacanta ee loo yaqaan 'Cplus flex' iyo kan loo yaqaan 'Folio tablet' oo isku laaban
Lenovo ayaa shalay soo bandhigtay laba aaladood oo gaar ah: Mobilada loo yaqaan 'Cplus mobile' oo noqda wax la gashado, iyo kan loo yaqaan 'Folio tablet' oo kalabar ku laabma
10 barnaamij oo muhiim u ah kiniinkaaga Android ee leh isku xirnaanta qalabkan weyn
Haddii aad haysatid kiniin Android ah oo aad badanaa isticmaasho Skype, oo leh nooca 7.0 waxaad si buuxda uga faa'iideysan kartaa shaashaddaas weyn.
HTC waxay joojineysaa soosaarka kiniiniga Google ee Nexus 9
Maanta HTC waxay ku dhawaaqday inay joojisay soo saarista kiniiniyada Nexus 9 kadib markii la bilaabay Oktoobar 2014.
NVIDIA inay soo saarto kiniin cusub oo SHIELD ah sanadkan
NVIDIA waxay dooneysaa inay sii wadato inay muujiso inay tahay awooda ugu weyn marka ay timaado ku ciyaarida Android iyadoo wadata daabacaad cusub oo kiniinkeeda SHIELD ah
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa falanqaynta dhameystiran ee Teclast X10 3G, oo dhan Lollipop Android iyo 3G Tablet oo ka hooseeya 100 euro.
Huawei wuxuu ku dhow yahay inuu tago wixii ka horreeyay kiniin leh P9 Max oo leh shaashadda 6,9 ″
6,9 inji oo loogu talagalay Huawei P9 Max oo naga dhigaya dhinaca hore ee cabbir cabbir aad u weyn ah sidii aan gacanta ugu haysan lahayn "kiniin 7 ah oo ka yimid kuwii hore
Kiniin noocee ah ayaa loo iibiyaa cunug? Soo ogow kaniiniyada ugu fiican kuwa yaryar. Soo ogow kaniiniyada carruurta ugu raqiisan uguna raqiisan.
NVIDIA Shield Tablet K1 wuxuu helayaa cusbooneysiintiisa Android 6.0.1
Kuwa ka mid ah sheekooyinka Marshmallow ilaa NVIDIA Shield Tablet K1 waa 3D Vulkan API oo awood u siin doonta ciyaaraha ku jira kiniinkan.
Opera Max ayaa lagu cusbooneysiiyaa iyadoo loo adeegsanayo kiniiniyada
Opera Max wuxuu helaa wax cusub si loo wanaajiyo isticmaalka xogta markii la rakibo oo laga bilaabo kiniin, qalab weyn
Tirooyinka iibka kiniiniga adduunka ayaa hoos u dhici doona 5,9% sannadkan
Iyadoo riixitaanka Microsoft oo leh astaantiisa 'Surface', xitaa sanadkaan wadarta tirada iibka ee kiniiniyada ayaa hoos u dhacaya
Suuqa Tablified waa habka ugu wanaagsan ee lagu helo codsiyada ugu fiican kiniinkaaga
Haddii aad raadineyso barnaamijyo lagu hagaajiyay kiniinkaaga Android, Tablified Market waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican maanta
Kamaradan ilmaha ee Android waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka xakameyso kanaga yar taleefankaaga Android ama kaniiniga
Kaamiraddan xiisaha badan ee carruurta Android waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka aragto taleefankaaga Android ama kiniiniga dhammaan dhaqdhaqaaqyada ilmahaaga yar meel kasta.
Hoosudhaca Kiniiniyada: Miyuu Dhamaaday?
Iibinta iyo dulsaarka kiniiniyada ayaa hoos u dhacaya. Waxaan falanqeyneynaa sababaha iyo waxa mustaqbalka noqon doona aalad waxtar u leh su'aalaheeda.
Laba kiniin oo cusub oo Samsung ah ayaa ku qoran Zauba
Soo saaraha Kuuriya ee Samsung wuxuu leeyahay laba kiniin oo cusub oo noqon doona cusbooneysiinta sanadkii hore ee Galaxy Tab 2
HTC waxay ku khamaaraysaa kiniiniyada la soo galayo oo leh Desire T7 oo leh shaashad dhan 6,9-inji
Laga soo bilaabo GFXBench, kiniiniga cusub ee HTD Desire T7 ayaa u muuqday mid u muuqda 1 GB oo RAM ah iyo shaashad 6,9-inji ah
Casharrada soo socda ee wax ku oolka ah oo ay taageerayaan fiidiyoo dhameystiran oo aan ku sharraxayo dhammaan tallaabooyinka ...
Dib u eegista Isbaanishka ee Teclast X16 Pro kiniin PC ah, UltraPC DualBoot oo ah qiime aad u tartan badan
Maanta Dib-u-eegidgan Isbaanishka ah ee loo yaqaan 'Tablet Teclast X16 Pro' waxaan ku falanqeyneynaa terminaal na siinaya qiimo aan caadi aheyn oo aan ku haysan karno sida ugu fiican ee labada adduunyo sida Android 5.1 Lollipop iyo Windows 10.
LG G Pad II 8.3 LTE waa kiniin cusub oo Android ah oo wata Stylus iyo USB port
Bisha soo socota LG G Pad II 8.3 LTE cusub ayaa laga bilaabi doonaa Kuuriya oo bixisa qalin Stylus iyo taageero buuxda oo USB ah.
Tani waa waxa NVIDIA Shield K1 ay u egtahay Android 6.0 Marshmallow
NVIDIA waxay daabacday fiidiyoow muujinaya wararka la imaan doona cusbooneysiinta NVIDIA Shield Tablet K1 ilaa Android 6.0 Marshmallow
Maanta waxaan soo bandhigeynaa, falanqeyneynaa oo kugula talineynaa kiniiniga Onda V919 AIR DualOS, oo ah kiniin dareen leh qiimo lagu qosli karo.
Hadda waxaad ku iibsan kartaa Google Pixel C € 499
€ 499 waxaad ku iibsan kartaa kiniinkii ugu horreeyay ee uu naqshadeeyay Google: Pixel C. Kiniin isu beddelaya iskudhaf haddii aad oggolaato iibsashada keydkiisa
Google Pixel C, astaamaha ugu horreeya ayaa soo muuqda
Google waxay si dhakhso leh u soo bandhigtay kiniin cusub oo la yiraahdo Pixel C. Tan iyo markaas wax kama ogaan karno wax intaas ka badan, illaa maanta, jaangooyooyin ayaa soo muuqday
MiPad 2 waa kiniin cusub oo bir ah Xiaomi
Xiaomi MiPad 2 waa kiniin cusub oo bir ah oo shirkadan Shiinaha laga leeyahay ay timid iyadoo ujeedkeedu yahay inuu ka mid noqdo aaladaha lagu bixinayo Kirismaska.
Perch wuxuu taleefankaagii hore ama kaniiniga ahaa u beddelaa adeegga kormeerka gurigaaga
Perch waa barnaamij ujeedkiisu yahay inuu ka soo ceshto mobilkaagii hore si looga ilaaliyo aagag gaar ah oo ka tirsan gurigaaga degelkiisa.
ASUS waxay soo saari kartaa kiniin kale oo Nexus ah
ASUS waxay soo saari kartaa kiniin Nexus ah. Waxaa jira hadal ah in ASUS ay soo saari karto kumbuyuutar casri ah oo cabbirka shaashaddiisu noqon doonto waxa weyn ee aan la aqoon.
Samsung waxay diyaarisay kiniin 18,5-inji ah oo leh Galaxy View
Samsung Galaxy View waa kiniin weyn oo leh 18,5 inji kaas oo aan ka arki karno sawirradan.
Bandhigyada 8K, qaraarka xiga ee taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada
Waqtigan xaadirka ah suuqa waxaan ka helnaa shaashado leh 2K iyo 4K xal. Telefoonada casriga ah ee mustaqbalka ayaa lagu qalabeyn doonaa bandhigyo 8K ah.
Astaamaha cusub ayaa soo bandhigaya qeexitaannada Samsung Galaxy View kan weyn ee tablet shaashadda Samsung ah
Daadadka cusub ee Samsung Galaxy View, kiniin weyn oo Samsung ah oo Samsung ah oo wata shaashad dhan 18,5.
ASUS waxay heshiis la saxiixatay Microsoft si ay horay ugu sii shubto barnaamijyadooda Office-ka taleefannadooda Android iyo kiniiniyada
ASUS waxay heshiis la gashay Microsoft si ay ugu shubto barnaamijyadooda Office taleefannadooda iyo kiniiniyada soo socda ee Android.